ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: မြန်မာနိုင်ငံ အလံများ (၁)
ရေးပြီးချိန်: 6/25/2007 12:22:00 AM
မဆိုး ကျွန်တော် သိရသလောက် အပေါ်ဆုံးက အလံ ဟာ စစ်တပ်တက်လာမှ သုံးတဲ့ အလံမို့... တရားမ၀င်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သိပ်တော့ မသိဘူးဗျ..သိသူများ ပြောပြ ကြပါဗျာ
အလံတွေ အများကြီးပါလား။ မြန်မာနိုင်ငံအလံလောက်ပဲ သတိထားမိတာ။ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အလံတွေကို သတိမထားမိဘူး။ မမရေ ကျေးဇူးပါနော်
ခုမှ ခေတ်အဆက်ဆက်က နိုင်ငံတော်အလံတွေကိုတွေ့ဖူးတာ။ s0wha1 ရဲ့ကြိုးစားမှုကို လေးစားပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက်အလံတွေ ခုမှမြင်ဖူးတယ် ညီမရေ ...ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအလံတွေလဲ ခုမှ စုံစုံလင်လင် သိတော့တယ် ... ညီမလေးက တော်လိုက်တာ ... ... ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် ...နော် ..
ပထမတော့ စိတ်ထဲမှာ ကရင်ပြည်နယ်အလံက ဖားစည်ပါသလားလို့ ထင်နေတာ…၊ နောက်မှ သတိရတယ်။ နေ၀န်းနဲ့ ဖားစည်အလံက ကေအင်န်ယူ အလံ…။ အခု အသစ်ပြင်ဆင်ဖွယ်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အလံသစ်တော့ မတွေ့မိဘူး။ ညီလေး မင်းမင်း၊ အပေါ်ဆုံးကအလံက စစ်တပ် လက်ထက်မှ ပြောင်းလိုက်တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားဝင်သွားတယ်လေ။ လက်ရှိ နိုင်ငံတကာမှာ သိနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံက အဲဒါပဲ။
ကျွန်တော်ကြားဖူးတာက စစ်တပ်က ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်လို့ အလံတို့ ဘာတို့ ညာတို့ ပြောင်းလို့မရဘူးလို့ ကြားဖူးလို့ပါ။ သူတို့ကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့ အတွက် ၊ သူတို့ ပြောင်းလိုက်တဲ့ အလံလည်း ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ်မပြုသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်မလားမသိ
27 Jun 07, 14:50
Yan: လာလည်သွားတယ် မဆိုးဝှက်လေးရေ... အလံတွေကို ထိုင်ပြီးခံစားသွားတယ် သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ. ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရလိုက်တယ်. အားပေးနေမယ်ဗျို့. စာဆက်ရေးပါ.
ဘလင့်: အဟား အမရေ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာ အလံ အကြောင်း ပို့စ် ရေးထားသေးတယ် အမလောက်တော့ မစုံဖူးပေါ့ တိုက်တုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ကျွန်တော်လည်း site တစ်ခုမှာ အလံ အကြောင်းတွေ့တာနဲ့ ရေးဖြစ်တာ
Psycho- THe leGenD said...